Mampitandrina amin'ny karazana karazana WordPress tranonkala ny Semalt
Raha miverina amin'ny laoniny ny fiarovan-tenanao, mety ho hitan'ny spam ny tranonkala. Fantatsika rehetra fa WordPress no rafitra ankapobeny sy malaza indrindra amin'ny votoatiny. Noho ny isa marobe sy ny habaka atonta WordPress an-tserasera, dia saika tsy ho vitantsika ny mijanona amin'ny fiarovana ny WordPress hacks.
Ryan Johnson, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia manome fanazavana momba ireo karazana tranonkala WordPress samihafa ao amin'ny Internet ho anao mba hijanona ho voaro.
Ny malware dia mandrakotra ny karazana programa sy programa mampidi-doza sy mahatsikaiky, toy ny viriosy, tranaona, ransomware ary spyware. Hahita ny kaonty Google Analytics ianao; Malware ihany koa ireo pop-ups ao amin'ny tranonkala fampitandremana hampitandremana antsika mba hanamafisana azy araka izay haingana. Tokony hametraka viriosy na programa manohitra malware ianao mba hanesorana azy. Ny malware dia afaka manao ny karazan-javatra mahatsiravina toy ny fangalarana ny antsipiriany momba ny karatra, fampahalalana manokana, manimba ny tranonkalanao, manaisotra ireo rakitra manan-danja ary manidy ny ordinatera na ny fitaovana findainao mandra-pamoizanao ny vidim-panavotana
Ny fanafihan'ny phishing dia mitranga amin'ny alàlan'ny mailaka manintona anao hanokatra sehatra sasany na hidirana amin'ny tranonkala vitsivitsy toy ny PayPal, ny bankin'i Amerika ary ny hafa. Tian'izy ireo ny manindry ny rohy mampiahiahy ary mijery marina. Amin'ny ankapobeny, ny fanafihan'ny phishing dia natao hamitahana anao, ary ireo hackers dia mampiasa ireo mailaka ireo mba hangalatra ny fahazoan-dàlanao amin'ny aterineto. Tsy tokony hiantehitra na oviana na oviana mailaka ianao izay toa mampiahiahy na hafahafa.
Ny SQL dia tenim-pirenena ampiasain'ny bilaoginao WordPress sy tranonkala. SQL (Fitenin'ny Structured Query) dia manampy amin'ny fifandraisana amin'ny tahiry. Raha ny tena izy, ny SQL dia afaka manolo ny fangatahana SQL amin'ny code izay mitarika ny angon-drakitra mba hanao zavatra toy ny hacking sy phishing. Ny hackers dia mampiasa io fampahalalana io mba hangalarana ny angon-drakitrao ary handefa ny rakitrao avy amin'ny solosaina iray amin'ny iray hafa. Plugins sy lohahevitra samihafa amin'ny Wordpress dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny tsindrona SQL.
Amin'ny kaonty mailaka isan-karazany amin'ny aterineto dia mampiasa ny tenimiafina mitovy amin'ny toerana samihafa ny olona. Raha mahita ny iray amin'ireo tenimiafinao ireo mpiloka dia mety ho mora ny miditra amin'ny kaontinao manokana. Izany no antony tokony hisorohanao ny tenimiafinao tsy hanakorontana sy hitazonana ny tenimiafina samihafa ho an'ny kaonty samihafa.
Fanavaozana ny rindrambaiko tsy fantatra
Ireo manam-pahaizana WordPress dia mazoto amin'ny fanatsarana ny plugins, ny rindrambaiko ary ny lohahevitra. Ireo mpampiasa Wordpress dia tsy mazoto amin'ny fametrahana sy fanavaozana ny fandaharan'izy ireo. Noho izany, ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao dia mety hitarika anao hijaly ao amin'ny aterineto. Azo antoka ny filazana fa lasa iray amin'ireo olana goavana ao amin'ny aterineto izany ary mety hamoy ireo antontan-dahatsoratra sarobidy sy rakitra noho ny fanavaozana rindrambaiko maimaimpoana.
Ireo lohahevitra tsy azo antoka sy plugins
Satria ny olona samihafa dia manolotra code ho an'ny WordPress amin'ny endrika endrika sy ny plugins, ireo hackers dia afaka manely ny malware sy ny viriosy ao aminy mora foana. Ny fiarovana tsara indrindra dia ny fanavaozana ny plugins sy ny lohahevitra novaina.
Politika Fiarovana Mahomby
Ny politikan'ny fiarovana mahantra dia mety hahatonga anao ho kivy, ary mety hijanona ny asanao. Raha maro ny olona afaka miditra amin'ny tranokalanao, tsy mila manao ny Admin ianao. Azonao atao kosa ny manendry azy ireo andraikitra samihafa ary manakana azy tsy hiditra amin'ny tranokalan'ny Admin of WordPress
Nieli-patrana ireo fanafihana an-tserasera ary navotsotra mora tamin'ny Internet. Afaka mitondra entana am-polony maro izy ireo raha tsy mahalala ny webmaster Source .